Olee ka jikota MTS Files
Tupu anyị na-atụle n'ihu banyere Merging MTS ma ọ bụ M2TS faịlụ ọnụ, anyị ga-amata ihe ndị a faịlụ na ụdị bụ na ihe ndị ha na-eji maka. Ndị a formats bụ maka gị HD Camcorders. Ka ihe atụ, mgbe onye captures a video dị ka nke a, e nwere ọtụtụ ihe ndị videos agbajikwa na akụkụ kama otu video. MTS mmakọ software nwere ike jikota videos nke bụ na akụkụ na iche-iche a nnukwu video. Professionals eji software nke bụ kpọmkwem na-enweghị ntụpọ n'ihi na nke a ọrụ. M akwado Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka nke a ụdị ọrụ dị ka ọ na-erepịakwa obere oge na-anapụta enweghị ntụpọ results.
Nke a video nchịkọta akụkọ-enyere gị aka jikota MTS faịlụ ọnụ site na-eme a mfe iji Dọrọ na dobe. Ma na-eche, ị na-dezie gị na obere vidiyo dị nnọọ n'ihu merging. Ugbu a, i nwere ike itinye foto na foto videos, ime aha edezi, tinye Photoshop mmetụta, retouch ha wdg Merging na MTS faịlụ na a na ngwa dị mfe. Ka m agbaji ya ala nzọụkwụ nnọọ otú ị pụrụ ịghọta na-eso nzọụkwụ dị ka ị na-ahụ kwesịrị ekwesị.
Nzọụkwụ 1: Ị ga-agba ọsọ ahụ MTS mmakọ maka ọrụ a. Ozugbo ọ bụ na, i kwesịrị pịa "Import" na-ewetara gị faịlụ na. The faịlụ ga ahụ na-egosi na "Ọrụ Album". N'ezie ị nwekwara ike ịdọrọ na dobe faịlụ na ị chọrọ ka jikota site na kọmputa gị na "User Album".
Nzọụkwụ 2: The nzọụkwụ nke abụọ nke usoro ga-iji na-enweta vidiyo na usoro iheomume. Ozugbo ị na-eme, ị ga-ahụ usoro iheomume nke mmakọ jupụtara videos ị họrọ. Ị nwere ike ịgbanwe iji nke na-egwuri egwu na vidio ndị a. N'ihi na, ịdọrọ na dobe abụọ videos inyerịta ha ebe. Ma ịkpachara anya ịghara ịdọrọ na dobe vidiyo na ibe dị ka ọ ga-egbochi ndị videos. Ozugbo ị na-mere, na-a ndụ atụ nke otú ihe panned ke preview window.
Nzọụkwụ 3: A mfe edezi tupu merging nke faịlụ pụrụ bara uru n'ihi na video àgwà nke merged faịlụ. I nwere ike ịgbalị edezi olu etoju maka onye ọ bụla faịlụ, saturation gwara, Foto dị na Foto dị video, iche na ihie ntọala na ọtụtụ ndị ọzọ si edezi panel.
Nzọụkwụ 4: Ọ bụrụ na i mere ihe dị mkpa maka video, ị nwere ike ahụ kwaga ikpeazụ nzọụkwụ. Họrọ "Mepụta" ime ka otu nnukwu video ị na-ezubere iche. Họrọ mmepụta usoro nke faịlụ, ị nwere ike họrọ àgwà nke faịlụ site na Ngwaọrụ, DVD na YouTube kwa. Mgbe ahụ kụrụ "Export".
Dị ka ị pụrụ ịhụ, merging na MTS faịlụ dị nnọọ mfe ma ọ bụrụ soro nzọụkwụ ke ziri ezi usoro. Dị na-eji Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) Software na mmakọ n'ụzọ ziri ezi na-ọrụ ahụ. The n'ezie usoro nnọọ obere na-ewe oge na-eweta oké results n'ihi na gị HD video E. Enwe dị oké ọnụ ahịa oge nke ndụ unu ọ bụghị na iberibe ma na otu nnukwu nkiri na HD format video.
Top 5 MTS Video edezi Software-atụ aro
Olee otú iji tọghata MTS ka QuickTime Ò Kwekọrọ n'Ozizi Format
Olee otú Play na tọghata MTS Files na VLC
Olee otú Mee 3D Animation na Mgbe mmetụta
Olee otú Mepụta Text Animation na Mgbe mmetụta
Olee otú m tọghata A File Iji Otu ISO?
Olee otú Download 4K Videos
> Resource> Video> Olee ka jikota MTS Files